अब एसईईको नतिजा कहिले प्रकाशन गर्ने भो कुन महिनामा? – List Khabar
Home / समाचार / अब एसईईको नतिजा कहिले प्रकाशन गर्ने भो कुन महिनामा?
admin June 14, 2021 समाचार Leaveacomment 73 Views
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को सबौ कर्य सकेर साउन्को १५ गते भित्रै प्रकाशन गर्ने गरि बनएको छ कार्यसुची।
विद्यालयले गरेको विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन, जिल्ला समन्वय एकाइमा त्यसको अभिलेख तथा बोर्डबाट आवश्यक सबै कार्य पूरा गरेर साउनको १५ गते भित्र विद्यार्थीको हातमा नतिजा दिने तयारीका साथ काम सुरु हुने बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले विद्यार्थी मूल्याङ्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि आइतबार पारित गरेको हो। सही कार्यविधिका आधारमा विद्यालयबाट विद्यार्थीको अन्तिम आन्तरिक मूल्यांकन हुनेछ।
Previous कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या घट्दै , ओरालो लाग्यो कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुने सङ्ख्या
Next अम्बाको पात सेवन गर्दा हुने फाइदाको बारेमा जानिराखौँ